झिंगा फिरिरी : एक जिवन्त सरसफाइ गित ! – Public Health Concern(PHC)
हामीले खाने भातको थालमा झिंगा फिरिरी–
दिसामा हेरौं बच्चाहरुको, फोहर मैलामा झिंगा !
त्यहाँ मात्र हैन, हामीले खान,े भातको (खानाको) थालमा झिंगा !!
हामीले खाने भातको थालमा झिंगा फिरिरी –
राख्नुपर्छ, हामीले संध,ै खानालाई छोपेर !
छोपेनौ भन,े झिंगाले ल्याउँछ, दिसालाई बोकेर !!
घरको हाम्रो, वरिपरी फोहर राख्नु हुंदैन !
फोहर मैला, नराखेपछि, रोगले छुदैन !!
बच्चाको दिसा, डरलाग्दो हुन्छ,, चर्पी त्यसको साँचो !
गाउघरमा, हामी सबैलाइर्, चर्पी कै छ खाँचो !!
झिंगा फिरिरी २
पाखामा (खोलामा) दिसा गर्यो भने, पानीले बगाउँछ !
त्याही पानी, हामीले, पियौ.भने, रोगले सताउछ !!
बच्चाको दिसा ठूलाको दिसा चर्पिमा सारेको !
घरमा फोहर, पारेको हैन, झिंगालाई मारेको !!
झिंगा फिरिरी –२
हामीले खाने भातको थालमा झिंगा फिरिरी !!
लेखक : बद्री प्रसाद सिवाकोटी
रचना मिति र स्थानः २०४३ साल भदौ, पुर्वाञ्चल स्वास्थ निर्देशनालय तालिम केन्द्र, घनकुटा!
Tags: Health Songhealth workers penJanaswaasthya SarokarJhinga FiririSanitation Song